Nezidingo zabantu - lena isihloko eziyinkimbinkimbi ukuthi ososayensi bezenhlalo baye uphenyo isikhathi eside. Futhi kumnandzi, ngoba izifiso zethu ngokuvamile iyimbangela ikhomishana izenzo ezehlukene. Ekustadisheni le nkinga, kungenzeka ukuhlonza ubudlelwano imbangela nemphumela e yokuziphatha kwesintu.
Kunezindlela eziningi izidingo ngezigaba. Ngisho esikoleni esiphakeme social sciences namuhla kuhilelani ekutadisheni mbhoshongo Maslow sika. It ikuvumela ukuhlela ngokucacile zonke izidingo zabantu.
Iphuzu kule Isikimi ukwehlukana zonke izifiso komuntu engokomoya, begazi futhi nomphakathi. Bonke 'zinezikhathi ngendlela ethile. Pyramid is schematically kusenzo ifomu unxantathu yizinqamu ezintathu. Ngaphansi kwesithombe senqaba ke amanga izidingo begazi abantu. Lezi zihlanganisa wokuqala nomkhulu kunabo bonke isidingo ukwanelisa ekulambeni nasekomeni. Ngaphezu kwalokho, isidingo somuntu ongizalayo isidingo izingubo nendawo yokukhosela, isifiso sokuthwala abantu ukuzala, nokunye.
ukuhlangabezana nezidingo esohlwini kuphela ngenhla, umuntu ecabanga nomphakathi. Kuphela lowo wapha, zigqokiswe, ugqoke futhi unekhono ukulala emizini yabo, uzofuna ukuxhumana nabanye abantu. izidingo zomphakathi of abantu - yisidingo ukuqashelwa yomphakathi, impumelelo emisebenzini yomphakathi.
Ngokuthakazelisayo, ukuxhumana nabanye kubaluleke kakhulu kwabanye abantu izidingo ngqangi. Nokho, lokhu kuyinto engavamile.
Ngamazinga aphakeme, esigabeni sesithathu ahlelwe izidingo ezingokomoya. Lokhu kusho ukuthi, ukukhuluma cishe, nidla ukudla kwasemini yakhe futhi ingxoxo nomngane wakho ocingweni ngamunye uqala ukuzizwa ukuthi ufuna ukwakha, bahlanganyele self-ukuthuthukiswa, ukukhanyiselwa. Lona eliphakeme izidingo zomuntu evelayo ngaphansi kwezimo ezithile kuphela, udzinga "inhlabathi".
Kodwa ngisho lapha kukhona okuhlukile. Phela, umlando ligcwele izibonelo abaculi ku imali yokugcina wathenga useyili futhi upende, esikhundleni sokuba ukuthenga isinkwa.
Kunezinye izindlela sokuhlukanisa ngemacembu isidingo somuntu. Ngokwesibonelo, ngezinye izikhathi ingaba umthombo ezingokomoya nezingokwenyama. Into yokuqala sonke kudingeka ukudla okunomsoco nezambatho ezifudumele. Nokho, ngesikhathi esifanayo sifuna dish wabheka amahle izingubo fit okuthandwa yethu yobuhle. Ngakho, izidingo zezinto ezibonakalayo kungaba kokubili bemvelo nemasiko. Ngesikhathi esifanayo amaqembu amabili amakhulu idinga - ezingokomoya nezingokwenyama - nayo sihlobene eduze. Ngokwesibonelo, ukubhala umculo, kufanele ube zomculo, iphepha nezibaya.
Izidingo kungenziwa labizwa, futhi ezinye izindlela. Ngokwesibonelo, ngezinye izikhathi ingaba umthombo:
Ngamunye. Ngamanye amazwi, kuba yini edingekayo ngesikhathi iphuzu elithile umuntu othize. Ngokwesibonelo, manje umuntu uyaphupha bezokudla sitrobheli noma aphindisele ukulala amahora ama-2.
Iqembu. Injongo ngezinye izikhathi ezibalulekile nabantu abaningi. Ngokwesibonelo, e indlu anqunywe bafudumale. Bonke abahlali uyoba nesithakazelo eqinisweni lokuthi ekuphathweni balungisa uhlelo Ukushisa.
Okubalulekile wonke umphakathi. Lokhu, isibonelo, amanzi ahlanzekile. yenkinga umhlaba ohlanzekile namuhla Liyindawo efanele. Ngenxa yalesi sizathu, namuhla bonke unesithakazelo yokuthi amanzi kufanelekile ukusetshenziswa.
Njengoba ubona, izidingo zomuntu zingase zishintshe kakhulu.